Vaovao - Inona avy ireo fitaovana mety amin'ny masinina fanapahana laser
Inona avy ireo fitaovana mety amin'ny masinina fanapahana laser
Inona avy ireo fitaovana mety amin'ny milina fanapahana laser
Ny fahaterahan'ny metaly milina fanapahana laser dia ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny fanapahana marina. Saingy ny fahombiazana avo lenta sy ny fametrahana mazava tsara dia lavitra lavitra izay azon'ny olombelona atao.
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina, mihombo hatrany ny teknolojia mandroso amin'ny sehatry ny fampiasana anarana. Ohatra, ny laser dia zavatra hafahafa sy mistery ho an'ny olon-tsotra tamin'ny taonjato lasa. Ankehitriny, miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia, ny laser dia nampiasaina tamin'ny indostria maro. Androany, andao hiresaka ireo fitaovana mety aminy milina fanapahana laser.
1. fanapahana takelaka vy:
Ny rafitra fanapahana laser Jiatai dia afaka manapaka ny hatevin'ny takelaka vy karbaona indrindra hatramin'ny 20 mm, ary ny sisin'ny takelaka manify dia mety ho kely kokoa amin'ny 0,1 mm. Ny faritra misy ny hafanana amin'ny fanapahana laser ny vy vy ambany dia kely dia kely, ary ny fiarahana manapaka dia fisaka, malama ary misy perpendicularity tsara. Ho an'ny vy avo lenta, ny kalitaon'ny fanapahana laser dia tsara kokoa noho ny an'ny vy karbaona ambany, fa ny faritra misy ny hafanana kosa dia lehibe kokoa.
2. fanapahana vy vy:
Ny fanapahana laser dia mora kokoa ny manapaka takelaka vy. Miaraka amin'ny rafitra fanapahana laser laser mahery, ny hatevin'ny vy tsy misy fatrany dia mety hahatratra 8mm.
3. fanapahana lovia vy:
Ny ankamaroan'ny vy dia azo tapahina amin'ny laser, ary tsara ny kalitaon'ny fanapahana. Fa ho an'ny vy vy sy vy maty fitaovana miaraka amin'ny atiny tungsten avo dia hisy ny fikaohon-tany sy ny fikorontanana mandritra ny fanapahana laser.
4. fanapahana lovia aluminium sy firaka:
Ny fanapahana aliminioma dia an'ny fanapahana vy. Ny kalitaon'ny fanapahana tsara dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fanapoahana ireo fitaovana an-idina amin'ny faritra fanapahana amin'ny entona fanampiny. Amin'izao fotoana izao, ny hatevin'ny takelaka aluminium manify dia 3mm.
5. Fanapahana fitaovana metaly hafa:
Ny varahina dia tsy mety amin'ny fanapahana laser. Manify be izy io. Ny ankamaroan'ny titanium, firaka titanium ary firaka nickel dia azo tapahina amin'ny laser.